တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်တွင် တစ်​လလျှင်​ ၂ကြိမ်​ ကျင်းပမြဲ ဖြစ်​​သော Lunch Time Talk ကျင်းပ Welcome to University of Traditional Medicine(UTM), Mandalay .This web site is launched on 11.11.2019.( ၁၃၈၁ တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့ တွင်လွှင့်တင်သည်။)
(+95-) 09-2005739 | (+95-) 02-4075681
University of Traditional Medicine, Mandalay. တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်
University of Traditional Medicine, Mandalay.
Board of UTM
Traditional Medicine Departments
Department of Ulcer and Sore
Department of Pharmacology(TM)
Basic Medical Science Departments
Department of Microbiology and Pathology
Literature and Language Departments
Department of Pali Sanskrit
Administration and Finance Units
Department of Herbal Garden
တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်တွင် တစ်​လလျှင်​ ၂ကြိမ်​ ကျင်းပမြဲ ဖြစ်​​သော Lunch Time Talk ကျင်းပ
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ​​လ (၄)ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
၄-၉-၂၀၁၉၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နံနက် ၁၁း၃၀ နာရီတွင် တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်၊ Medical Education Unit မှ ဦးဆောင်ကျင်းပသော Lunch Time Talk အခမ်းအနားကို အခန်းအမှတ် (၁၀၇)၌ ကျင်းပခဲ့သည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ် ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်(စီမံ) ဦးထွန်းမြင့်၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်(သင်ကြား ငြိမ်း) ပါမောက္ခ ဝင်းနိုင် ခေတ္တ မော်ကွန်းထိန်းဦးထွန်း​ ေ​မာင်​၊ ပါမောက္ခ ဌာနမှူးများ၊ ဆရာ၊ဆရာမများ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် အခြား စိတ်ဝင်စားသူများ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ဤအခမ်းအနားတွင် သဘာပတိအဖြစ် တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ် D​ဆေးဝါး​ဗေဒ ဌာနမှူး ပါ​မောက္ခဝင်​းစိုးက ဆောင်ရွက်ပြီး၊ Speaker ဖြစ်သူ ဒုတိုင်​းရင်​း​ဆေးမှူး ဒေါ်အိသဇင်ဖြိုး-TMTH,Mdy ​​း က ''Knowledge staring fot 1 yr language scholarship at Yunnun university of chinese medicine '' ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာကြသူများမှ မေးမြန်းဆွေးနွေးကြကာ အခမ်းအနားကို မွန်းလွဲ ၁၂း၃၅ နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။
Recents & Upcomings
The 10th Traditional Medicine Research Congress ဒသမအကြိမ်၊ တိုင်းရင်းဆေးသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲ	19 February 2020
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၅)ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ် Lunch Time Talk အခမ်းအနား ကျင်းပ	06 February 2020
အ​အေးမိ၊ တုပ်​ကွေး၊ ဖျားနာ ကာကွယ်ဆေးလက်ဖက် ခြောက်ထုပ် များ ပေးဝေငှခြင်း	09 December 2020
Covid လူနာများ ​သောက်ရန် တိုင်းရင်း​ဆေးတက္ကသိုလ် ​ဆေးဝါး​ဗေဒ ဌာနက ​ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထား​သော ဆေးလဘက်​ခြောက်	28 October 2020
Weekly internal(departmental) international journal reading	28 October 2020
တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်(မန္တလေး) အင်္ဂလိပ်စာဌာနတွင် သုတေသန စာတန်းဖတ်ပွဲနှင့် ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ	28 October 2020
Participating in IPE program in Medical and allied universities in Mandalay asaUTM participant	28 October 2020
Address : Ohbo ShweKyin Qtr, between No.1 road and Moegoke Madayar Street, Aung Myay Thar San Township; Mandalay, Myanmar.
Tel : (+95-) 09-2005739 | (+95-) 02-4075681
Web : www.utm.edu.mm
2021 © University of Traditional Medicine Mandalay, Myanmar. All Rights Reserved. | Themes by Agethemes | CM by K Network Web Services.